FileSonic,Hotfile,Wupload,Rapidshare တို့က ဖိုင်တွေ ဒေါင်းဖို့ Premium Accounts မရှိလို့ စိတ်ညစ်နေလား...??? ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော် skip to main |
မြန်မာလို IT ebook နည်းပညာ Ebook များ
Android ဖုံး နှင့် မြန်မာ Font Converter ဆော့ဝဲလ်များ
FileSonic,Hotfile,Wupload,Rapidshare တို့က ဖိုင်တွေ ဒေါင်းဖို့ Premium Accounts မရှိလို့ စိတ်ညစ်နေလား...???
FileSonic , Hotfile ,Wupload, RapidShare,FileServe တို့ ကနေ ဒေါင်းဖို့ Premium Account မရှိလို့အခက်ခဲဖြစ်နေသူများ
Premium Account တွေကို ဒီနေရာလေးကနေ သွားယူနိုင်ပါတယ် နေ့တိုင်း Update ပေးပါတယ်...
download အတွက် ညစ်နေသူများအတွက် အားလုံးအဆင်ပြေစေမှာပါ....။
အသုံးပြုပုံ။ ။ အပေါ်က ပေးထားတဲ့ လင့်ခ် ကိုနှိပ်လိုက်လို့ ရောက်ပြီဆိုရင် Date အရင်ဆုံး ကိုကြည့်ပါ....အောက်ကပုံလေးလိုပေါ့ဗျာ...
ဥပမာ ဒီနေ့အတွက် ( Premium Account )ကတော့ အနီရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့3ဆိုက်ဒ် Wupload , Hotfile , FileSonic အတွက်ပဲ ပေးထားတာပါ (တစ်ရက် နဲ့ တစ်ရက် မတူပါဘူး)... ဆိုတော့ Wupload ကနေ Premium Account နဲ့ ဒေါင်းချင်တယ် ဆိုကြပါစို့....
Wupload Premium Account ဆိုတာလေးကို ကလစ် လိုက်ရင် အောက်ပုံလိုမျိုးလေး ကြော်ငြာ စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ရောက်သွားမှာပါ....
5 စက္ကန့် လောက် စောင့်ပေးပါ......ပြီးရင် အောက်ကပုံမျိုးလေး လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်....
SKIP AD ဆိုတာလေးကို ကလစ်လိုက်ရင် ....Premium Account အတွက် သုံးရမဲ့ Username နဲ့ Password တွေကို ဒီလို တွေ့ရမှာပါ....Date ကိုကြည့်ပါ ဥပမာ MONDAY,DECEMBER 5,2011 ဆိုရင် MONDAY,DECEMBER 5,2011 နေ့အတွက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရမှာပါ နောက်ရက်တွေမှာ ဆက်သုံးလို့ မရပါဘူး....
အဲ့ဒီ Username နဲ့ Password လေးတွေကို Copy ကူးပြီး Wupload မှာသွားပြီးတော့ Login မှာထည့်ပေးပြီး.......ကြိုက်သလောက်သာ ဒေါင်းပေတော့ဗျို့.....
( ဒါက ဥပမာ အနေနဲ့ Wupload ကိုပြောပြတာပါ...။ Hotfile ကဒေါင်းဖို့ဆိုရင် Hotfile ကို အပေါ်ကရှင်းပြထားသလို ကလစ်လိုက်ရင် Hotfile ရဲ့ Premium Account ကိုတွေ့ရမှာပါ...ဒီအတိုင်းပါပဲ... ကျန်တဲ့ FileSonic , RapidShare,FileServe တွေကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးရမှာပါ....)
ဒီ အသုံးပြုပုံ လေးကတော့ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ခင်မျာ....အားလုံး.... Premium Account တွေကိုယ်စီသုံးလို့ လိုချင်တာတွေ အချိန်မကုန်စေပဲ တဝ ကြီး ဒေါင်း (Down) နိုင်ကြပါစေ.... Posted in: Internet Download Manager
အခုလို ရှယ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ နောက်မှ စမ်းကြည့်မယ်။ လောလောဆယ် မအားသေးဘူး။
အစ်ကို login မှာ ယူဇာနိမ်းနဲ့ ပက်စ်ဝက်ကို ကော်ပီကူးထည့်ပြီး ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမှာလဲ။ ဘယ်က ဒေါင်းရမှာလဲ။ အဲဒါမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ပြန်ရှင်းပြပေးပါဦးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါင်းမဲ့ Link ကို အရင်နှိပ်ပြီး Free Download နဲ့ Premium download ဆိုပြီး နှခုထဲက Premium Download ကိုနှိပ်ပါ အဲ့မှာ ယူဇာနိမ်း တွေ ပတ်စ်ဝက် တွေတောင်းရင်ထည့်ပေးလိုက်ပါ...:)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရေ... ကျွန်တော် Website ကလေးကိုလည်း လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..ဒီ Post ကလေးကိုလည်း ကျွန်တော် ကြိုက်လို့ ကူး ယူသွားပါတယ်...အဆင်သင့်လျှင် ကျွန်တော် Website ကလေးမှာ ပြန်ဖော်ပြခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်။ andrewaung
Blog က သေသွားပြီ အစ်ကို။ ပြန်တင်ပေးပါဦး။
Note of MIne
link is dead plz repair
ခင်ဗျားပေးတဲ့လင့်ကလည်း တကယ်အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူးဗျာ။ ကြာသွားလို့နေပါမယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Link can't use
အစ်ကို blog not foundြ​ဖ​စ်ေ​န​ပါ​တ​ယ်။ Arntmyo Zaw
galaxy note ကို jelly bean 4.1.2 တင်ချင်တာ hotfile ကနေdown ၇မှာ။ Premium acc က မရတော့ဘူး။ကူညီပါ့ဦး အကို
The link you provided is dead.Is there any other way to haveapremium account?Thanks in advance.
de post tin ta` ako gmail link lay ti chin par tal ma ti tar shi yin tin u chin lo par :Dplz thz u
honestboy.142@gmail.com add me :D
မရတော့ဘူး အကိုရေ။အကိုပေးထားတဲ့လင့်ကို နှိပ်တာ အပြာဆိုဒ် တခုကိုရောက်သွားတယ်။
Android Application ရေးနည်းများ
android email patten lock
android email ဆိုင်ရာ
China Clone ROM
Cyberlink Power DVD များ
Englishလို IT နည်းပညာ Ebook
File Copy Protecter
How to Download (ဒေါင်းလုတ် လုပ်နည်း ဖတ်ပေးပါ)
HUWAEI ROOT လုပ်နည်းများ
ime & basebrand ဆိုင်ရာ
IP နှင့် ဆိုင်သော
Keygen. Serial Key
LENOVO ROOT လုပ်နည်းများ
Microsoft Office Activetor
mobile guide ဂျာနယ်
Myanmar Operating System
SAMSUNG GALAXY FRIMAWRE
Speed Up Windoww
vzo for mobile
wifi hack boot cd
window XP window 8
window XP . window 8
Windows7Shortcut Error
Windows Browser Downloader
ပိဋကတ် (၃) ပုံ
မြန်မာ Font များ
မြန်မာ Operating System
မြန်မာ နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန်
Microsoft Windows 7: Ultimate 32 Bit and 64 Bit Fu...
Internet Download Manager v6.07 build 15 (just dou...
Internet Download Manager 6.08 Beta Build3(Late...
Malwarebytes Anti-Malware 1.51.2.1300 + Key
Uniblue PowerSuite 2012 3.0.5.5 Full Version + Se...
Internet.Download.Manager.v6.08.Build.2.Beta (20 D...
Spybot - Spyware ဖယ်ရှားရေး ကိရိယာ (ကွန်ပြူရှိသူတိ...
မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ 360 Amigo System Speedup ...
ကွန်ပျူတာကို သွက်လက် ပေါ့ပါး စေမဲ့ WinUtilities Pr...
Facebook Display Name ကို မြန်မာလို ပြောင်းချင်ရင်...
ဆော့ဝဲလ် စုသူများအတွက် ဆောဝဲလ်စုံ
ကွန်ပျူတာ Shutdown လုပ်သည့်အချိန် ကြာမြင့်လွန်းလ...
Gtalk မှာ Music name ဖေါ်ကြည့်ခြင်း
Anti Trojan Elite 5.4.7 | Full Version
PREMIUM ACCOUNTS အတွက် စိတ်မညစ်နဲ့
virus ကိုက်လို့ပျောက်သွားတဲ့ setting တွေကိုပြန်ဖော...
Safari Browser မှာ မြန်မာလို ဖတ်လို့ ရေးလို့ရအောင...
Opera Browser မှာ မြန်မာလို ဖတ်လို့ ရေးလို့ ရအောင်...
BitDefender Internet Security 2012 များ စုစည်းမှု့
SpeedyPC 3.0.2.0 + patch
Your Uninstaller! Pro 7.4.2011.15 (Latest Version)...
WinRAR 4.10 Full Version & 7Zip
Zawgyi to Unicode to Zawgyi Converter (JZ2UFileCon...
ဧရာ မြန်မာယူနီကုဒ်စာလုံးအသစ်များ ထပ်မံထွက်ရှိ
ZC Video Converter Ver. 3.9.9 Build 1754
ကွန်ပြူတာ ကိုပေါ့ပါးတွက်လက်စေတဲ့ Ashampoo Core Tun...
FileSonic,Hotfile,Wupload,Rapidshare တို့က ဖိုင်ေ...
အသုံးဝင်မဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးများ.....
Shweyoe Dictionary Version 2.0 (ရွှေရိုး Dictionary...
Internet Download Manager 6.08 Build 1 Beta (Nov 2...
mFormat_v1.1A - 4.15 ( Free Ware )
Connectify Hotspot v3.0 (WiFi)
မျိုးစုံကကြ ၊ မာန်မာနနှင့်
ဇာတ်ပွဲပြီးက ၊ ပြည်ဖုံးချသော်
ဘယ်မှာ ငါဟု ရှိအံ့နည်း။
ဝင်းကမ္ဘာကျော် ဝင်းကမ္ဘာကျော်(နည်းပညာမှတ်တမ်း) လေးဆီကို နည်းပညာတွေလေ့လာဖို့ ရောက်လာတဲ့သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ အားလုံး ထာဝရ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ